Ulwimi, iNjongo, kunye noNxibelelwano kwiingxoxo
Indima yeelwimi ekwakheni iziphakamiso
Nangona kunokuba kungathi kunqabile okanye kungabalulekanga ukuvelisa izinto ezibalulekileyo ezifana nolwimi , intsingiselo kunye nokunxibelelana, ezi zizona ziyinxalenye eziphambili zeengxabano-nangakumbi eziphambili kuneziphakamiso, ukungqinelana kunye nezigqibo. Asikwazi ukwenza ingqiqo ingxabano ngaphandle kokukwazi ukwenza ingqiqo yolwimi, intsingiselo, kunye nenjongo yento ekwaziswa kuyo kuqala.
Ulwimi luyintsimbi epholileyo kunye neyinkimbinkimbi esetyenziselwa ukunxibelelana nenani elingaqhelekanga lezinto ezahlukeneyo, kodwa ngeenjongo zethu apha sinokunciphisa indalo yonxibelelwano kwiindidi ezine ezisisiseko: ulwazi, ulwalathiso, imvakalelo, kunye nomthendeleko. Iibini zokuqala zihlala ziphathwa kunye ngenxa yokuba zichaza intsingiselo engqiqo, kanti ezi zimbini zivakala ukubonisa intsingiselo yengqondo.
Ukunxibelelana kolwazi kusenokusetyenziswa kwexesha eliqhelekileyo lokusetyenziswa kolwimi, kodwa mhlawumbi akunjalo njengokuba ininzi ikholelwa ukuba. Iindlela ezisisiseko zokuhambisa ulwazi ngetekethi okanye iziphakamiso (isiphakamiso nayiphi na isimemezelo esithetha into ethile yeqiniso, ngokuchasene nembono okanye ixabiso) - izakhiwo zengxoxo. Ezinye ze "nkcukacha" apha zingenakwenyaniso kuba zonke iingxabano azivumelekanga; nangona kunjalo, ngenjongo yokufunda ingcamango , ulwazi oludluliselwa kwingxelo lunokuba lubuxoki okanye luyinyaniso.
Umxholo onolwazi lwesitatimenti unakho ngqo okanye ungangqali. Uninzi lweengxelo kwiingxoxo ziza kuba zikho ngqo-into ebalulekileyo "njengabantu bonke bafa." Ingcaciso engachangekanga ingahanjiswa kwakhona xa ufunda phakathi kwemigca. Umongo, umzekelo, udlulisela ulwazi ngokuchanekileyo ngokusebenzisa iindlela ezifana nezifaniso.
Isikhokelo soqhagamshelwano sisenzeka xa sisebenzisa ulwimi ukwenza okanye ukuthintela isenzo. Imizekelo eyilulayo iya kubakho xa sisithi "Yeka!" Okanye "Yiza apha!" Ngokungafani nokunxibelelana kolwazi, imiyalelo ayikwazi ukuba yinyani okanye inkohliso. Ngakolunye uhlangothi, izizathu zokunika imiyalelo zinokunyaniseka okanye zibuxoki kwaye ngenxa yoko zilungele ukuhlaziywa kwengqiqo.
Imvakalelo kunye nemizwelo
Ekugqibeleni, ulwimi lungasetyenziselwa ukuthetha iimvakalelo neemvakalelo. Amazwi anjalo anokuthi angenakucelwa ukuba afune ukuphendula kwabanye, kodwa xa kuvela ulwimi lomzwelo kwingxabano, injongo kukuvusa iimvakalelo ezifanayo kwabanye ukuba bavumelanise nezigqibo zesigqibo.
Ndibonise ngasentla ukuba ukusetyenziswa kweelwimi kusetyenziswa ukuthetha ngentsingiselo yemvakalelo, kodwa oko akunjalo ngokuchanileyo. Ingxaki ngolwimi lomkhosi kukuba lungaquka zonke iindidi ezintathu kwezinye izinga kwaye kunokuba nzima kakhulu ukutolika ngokufanelekileyo. Umbingeleli usebenzisa amabinzana enkonzo angabhalwa ngolwazi malunga nesithethe senkonzo , ecela ukuphendula kwangokwemvakalelo kubamkeli bezenkolo, kwaye ubalathise ukuba baqale isigaba esilandelayo sesithethe - yonke kanye kanye kunye nehafu enye.
Ulwimi lwemizwi alukwazi ukuqondwa ngokoqobo, kodwa akukho nentsingiselo engokoqobo inganakunyuswa.
Kwiintetho eziqhelekileyo, asihlangani nazo zonke iindidi ezine zonxibelelwano kwifom yabo "ecocekileyo". Ngokuqhelekileyo, unxibelelwano lwabantu lusebenzisa zonke iintlobo zezicwangciso ngexesha elilodwa. Oku kunjalo neengxoxo, apho iziphakamiso ezijolise ukuhambisa ulwazi zingacatshulwa ngendlela eyenzelwe ukukhupha imvakalelo, kwaye yonke into ibangela ukuba kubekho umyalelo - umyalelo othile omele ulandele ukususela kwimvume ekuthethwa ngayo.
Ukukwazi ukwahlula ulwimi kunye nolwazi luyinxalenye ebalulekileyo yokuqonda nokuvavanya ingxabano. Akuqhelekanga ukungabi nasizathu sezizathu zokwamkela inyaniso yesigqibo esigxininiswe ngokusetyenziswa kwesigama sengqondo-ngamanye amaxesha, ngamanye amaxesha, ngezinye izikhathi.
Ukusetyenziswa ngokuzikhethela kolwimi lweemvakalelo kunokubonakala kwiintetho ezininzi zezopolitiko kunye neentengiso zentengiso-ezi zenziwe ngokucokisekileyo ukuze abantu bahlanganyele ngentshukumo yomzwelo into ethile. Kwiingxoxo eziqhelekileyo, ulwimi lwengqondo aluxhomekanga ngokucacileyo kuba ukubonakalisa imvakalelo yinto engokwemvelo yendlela esinxibelelana ngayo. Phantse akukho mntu wakha iziphakamiso eziqhelekileyo kwifomu ecacileyo. Akukho nto iphosakeleyo ngento leyo, kodwa iyanzima ukuhlalutya kwengxabano.
Injongo kunye nefuthe
Kungakhathaliseki iinjongo, ukukhupha ulwimi lwemizwelo ukushiya nje iziphakamiso eziluhlaza kunye nokuphazamiseka kubalulekile ukuqinisekisa ukuba uvavanya izinto ezilungileyo.
Ngamanye amaxesha kufuneka siqaphele kuba nelizwi elinye lingenalo intsingiselo engokoqobo kwaye engathandabuzekiyo, kodwa leyo ihamba neempembelelo zempembelelo ezichaphazela indlela umntu azakuphendula ngayo.
Cinga, umzekelo, amagama athi "umphathiswa" kunye "nomqeshwa karhulumente" - zombini angasetyenziselwa ukuchaza indawo efanayo, kwaye zombini azinalo ukuthatha inxaxheba kwiimeko zabo zangempela.
Okokuqala, nangona kunjalo, kuya kubakho ukucaphukisa intlungu ngelixa elilandelayo livakala kakhulu lihloniphekile kwaye lilungile. Kuphela igama elithi "igosa likaburhulumenteni" linokuvakala ngokungathandabuzekiyo kwaye lungekho kwimpembelelo enobungozi okanye engalunganga (ixesha, ubuncinane).
Ukuba ufuna ukuphikisana kakuhle kwaye wenze umsebenzi omhle ekuhloliseni iingxabano zabanye, kufuneka ufunde indlela yokusebenzisa ulwimi kakuhle. Eyona nto ingcono ukuba ulungise iingcamango zakho neengcamango, bhetele uya kuba nako ukuziqonda. Oko ke, kuya kukunika ithuba lokuzichaza ngeendlela ezahlukeneyo (ukubanceda abanye ukuba bakuqonde) kwakunye nokuvumela ukuba ukwazi ukuphawula iimpazamo ezifuneka zizinze. Le yilapho izakhono ngeengcinga kunye nokuqiqa okubalulekileyo zifika - kodwa phawula ukuba izakhono ngolwimi ziza kuqala.
Ukujongwa kweNkcazo yeNtlalo e-US
Iikholeji zeeKholeji zeKholeji ze-All-time Eading Rushers
Abaculi be-Pop abaphezulu be-Pop bonke bexesha